Eco Woman Page 1
pahafatesan`n`y zaza sepsis
pahafatesan`n`y zaza sepsis, ary ny pahafatesan`n`y zaza sepsis iombonana antsoina hoe areti-mifindra, izay niaraka tamin`ny bacteremia, raha ny loharanom-aretina avy amin`ny bakteria ho any amin`ny ra.
Ny iray amin`ireo fahita indrindra mahatonga ny tsy fiterahana eo amin`ny vehivavy dia hyperandrogenism - dia nilaina ny hanaovana ny endocrine rafitra.
Ahoana no very lanja ao amin`ny sauna?
Mazava ho azy, ny mahazatra nankany amin`ny sauna sy ny labiera miaraka amin`ny trondro maina Any an-kabine tsy nanampy tamin`ny very lanja.
hormonina fitsaboana ny endometriozy
Na ny vehivavy izay mikarakara ny fahasalamany, iharan`ny tahaka itony-nianatra sy mifono mistery ny aretina toy ny endometriozy.
D-dimer amin`ny vohoka
Mba ho fampiharana mitohy ny fanaraha-maso ny toe-javatra ny vehivavy, ny dokotera sasany voalazan`ny fitsapana amin`ny isam-bolana fototra - misy fandinihana dia atao indray mandeha ihany, raha ny hafa kosa fanafody ny fanaterana isam-bolana.
Ahoana no mba maso hanitatra ny efitra?
ny ankamaroan`ny mponina ny tanintsika mipetraka ao amin`ny trano kely, ary voan`ny kely efi-trano kely habeny.
A fanta-daza eto an-tany lasa Bali noho ny isan-karazany sy ny maro Resorts tempoly izay afaka hijanona ao amin`ny iray amin`ireo nosy kely indrindra ao amin`ny Vondronosy Malay.